रोमन Abramovich नाम विश्व प्रसिद्ध मानिस मा। आफ्नो जीवनी पनि विवादास्पद क्षणमा धेरै छन्। किन 1992 मा उहाँले जेल मा लगभग उतरा? Borisa Eltsina परिवार द्वारा कथित रूपमा? दोस्रो पत्नी एक oligarch प्राप्त छोडपत्र पछि राज्य के हो? र त्यो Chukotka जनसंख्या हिट? यो लेखमा छलफल गरिनेछ।
Abramovich रोमन Abramovich: जीवनी
भविष्यमा अरबपति साराटोभ मा यहूदीहरूको एउटा परिवार मा, 1966 मा जन्म 24 अक्टोबर थियो - Arcadia Nakhimovich र Irina। उहाँले मात्र एक वर्ष हुँदा, आफ्नो आमाको मृत्यु। चाँडै पछि निर्माण साइट मा दुर्घटना मृत्यु, र आफ्नो पिता - केटा चार वर्ष पुरानो थियो। समय भएकोले भविष्यमा प्रभावशाली को शिक्षा Ukhta आफ्नो मामा को परिवार काम गरे। केही समय पछि, 1974 मा, Abramovich मास्को आफ्नो अन्य मामा गए।
Kirzhach मा सेना मा सेवा पछि, रोमन वन को संकाय मा Ukhta औद्योगिक संस्थान प्रविष्ट गर्नुभयो। त्यहाँ जवानहरूले उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल देखाउनुभयो। तर म उच्च विद्यालय, रोमन Abramovich स्नातक छैन। देर 1980 को दशक मा उहाँले आफ्नो तेल व्यापार गतिविधिहरु चाँडै नेतृत्व जो व्यापार, सुरु गर्दा, आफ्नो जीवनी नाटकीय परिवर्तन भयो।
1992 मा, र राज्य सम्पत्ति को embezzlement को आशङ्का एक व्यापारीले जिम्मा मा लगियो। त्यसपछि म डिजेल इन्धन (3.8 मिलियन rubles को कुल रकम) संग रेल, एन मार्ग Ukhta देखि साइकेटिभकर गर्न "AVEKS-कोमी" को निर्देशन मा गुमाए। पछि यो इन्धन रीगा वितरित र कम्पनी "AKB" को सम्पत्ति भयो भनेर बाहिर गरिएका निर्देशक जनरल जो सिर्फ रोमन Abramovich थियो। उहाँले जेलमा गर्दा बसेका थिए भने जीवनी उद्यमी फरक हुन सक्छ, तर यो प्रमाण कमीको चाँडै बन्द भएको थियो।
व्यापार र राज्य स्तरमा पहुँच
1990 को दशक मा, Abramovich बोरिस Berezovsky को संग सम्पर्क बन्द गर्न थाले र साथै घर Borisa Eltsina मा प्राप्त भयो। राष्ट्रपति रोमन परिवार उहाँले "श्री एक" dignify गर्न थाले जहाँ Kremlin, मा एक घर मा सार्न निमन्त्रणा।
1996 मा, र "Noyabrskneftegas" को निर्देशक को बोर्ड को टाउको हुनुको एउटा उद्यमी, "Sibneft" को मास्को शाखा लाग्यौं। 1999 मा उहाँले Chukotka कि Abramovich पछि Chukotka IO नम्बर 223. एक उप निर्वाचित थियो दर्ता साझेदारी कम्पनी "Sibneft", पेट्रोलियम उत्पादनहरु को मार्केटिङ र सबैभन्दा "कालो" सुन लागि जिम्मेवार।
को Duma गुट को कुनै पनि एक व्यापारी थिएन। उहाँले Chukotka को राज्यपाल को सीट मा 2000 मा Duma परिवर्तन भयो। तपाईं मिडिया रिपोर्टहरू विश्वास छ भने, रोमन 2.5 भन्दा बढी अर्ब डलर स्वायत्त क्षेत्र विकास गर्न बलिदान। यो दिन, सबै भन्दा उदार philanthropists सूची घरेलू Abramovich निर्धक्क पहिलो स्थान लिन्छ।
2003 oligarch जीवन अंग्रेजी फुटबल क्लब त्यतिबेला खण्डहर को कगार मा थियो जो "चेल्सी", को खरीद द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। कि पछि, उद्यमी वास्तवमा बेलायत गर्न उत्प्रेरित छ।
2005 मा, को लागि Abramovich अर्ब 13.1 डलर कम्पनी "Sibneft" "Gazprom" आफ्नो खम्बा बेचे।
व्यापारी बारम्बार Chukotka स्वायत्त जिल्ला राज्यपाल रूपमा राजीनामा प्रयास गर्नुभयो, तर प्रत्येक समय रूसी राष्ट्रपति पुटिन उहाँलाई सम्भ्काउनु गर्न। व्लादिमीर Vladimirovich, क्रिस Hutchins, को जीवनी विस्तृत राष्ट्रपति र कुलीन वर्गहरु बीच सम्बन्ध वर्णन गर्दछ। उहाँलाई अनुसार, तिनीहरूले Abramovich यो पुरानो रूपमा पुटिन गर्न "तपाईं" अपिल गर्दा, एक बाबु र एक मनपर्ने छोरा जस्तै कुरा।
जुलाई 2008 मा, उपन्यास Chukotka राष्ट्रपति Dmitriem Medvedevym को गभर्नर, को पोस्ट देखि जारी थियो Abramovich व्यक्तिगत इच्छा नाम यसको निर्णय कारण रूपमा। अक्टोबर 2008 मा, व्यापारी को Chukotka Duma को अध्यक्ष बने।
रोमन Abramovich: जीवनी। व्यक्तिगत जीवन
अरबपति आधिकारिक दुई पटक विवाह भएको थियो। आफ्नो पहिलो पत्नी, ओल्गा Yurevna Lysova, Astrakhan को एक मूल थियो। रोमन को दोस्रो पत्नी Abramovich, Irina Vyacheslavovna Malandin (विवाह पछि - Abramovich), पेशा गरेर उडान परिचर थियो। तीन छोरी र दुई छोरा: त्यो oligarch पाँच जना छोराछोरी जन्म दिए। 1992 मा, अन्ना, जन्म Arkady थियो 1995 मा, 1993 मा जन्म भएको थियो, परिवार अर्को बच्चा प्राप्त - सोफिया, 2001 मा, Arina जन्म भएको थियो, र अन्तमा 2003 मा जन्म भएको थियो इल्या। यति धेरै बच्चाहरु बावजुद वैवाहिक सुरक्षित गर्न सकिएन - जोडी छोडपत्र थिए Chukchi जिल्ला अदालत गर्दा उहाँले, मार्च 2007 मा संकुचन। तिनीहरूले स्वतन्त्र सम्पत्ति को विभाजन गरिनेछ कसरी र छोराछोरीलाई बस्नेछन् कोसँग सहमत भए। यो जानिन्छ, को छोडपत्र पछि Malandin पूर्व-पत्नी $ 300 मिलियन योगफल प्राप्त।
अब व्यवसायी डिजाइनर Darey Zhukovoy (हेर्नुहोस्। फोटो तल) भेटे। आधिकारिक तिनीहरूले 2009 मा अरबपति Daria द्वारा चित्रित छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद त्यो एक छोरा जन्म दिए। उहाँले Aaronom Aleksandrom नाम थियो। Leia - र अप्रिल 2013 मा अर्को छोरी Romana Abramovicha प्रकाश आए।
उद्यमी हरेक प्रकारको सम्पत्ति एक ठूलो रकम छ। उहाँले तीन यटों लक्जरी वर्ग, जो पश्चिमी मिडिया स्वराङ्कित "नौसेना Abramovich" छ:
ग्रहण - जहाज, सबैभन्दा लामो मोटर यटों मा दुनिया स्तर मा दोस्रो सब।
Luna - लम्बाइमा जहाजयात्रा 115 मीटर, expeditions लागि डिजाइन।
Sussurro - Antibes मा रहछन अर्को नौका Romana Abramovicha। यो 50 मीटर को एक लम्बाइ छ र एक साथी पोत रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
यसअघि अरबपति स्वामित्व र अन्य ठूलो यटों, तर पछि बेच वा दिइन्छ। $ 300 मिलियन लागि Pelorus जहाज दाऊदले Giffen नौका Le Grand Bleu को सम्पत्तिको मा हस्तान्तरण भएको थियो एक अज्ञात खरीदार गर्न Evgeniyu Shvidleru र Ecstasea रोमन जहाज 2009 मा बेचिएको दान थियो।
पानी परिवहन साथै Abramovich हावा वाहन मालिक हो। उहाँले गर्न "Boeing 767-33A," कारण "bandit" को रूपमा जानिन्छ यसको विशिष्ट रंग पर्छ। यो विमान पहिलो ", हवाइ एयरलाइन्स" कम्पनी आदेश तर त्यसपछि त्यो आदेश रद्द, र रोमन "Boeing" किन्न निर्णय गरे। अर्को विमान Abramovich - A340-313H - यो 2008 मा खरिद गरिएको थियो। पनि एक उद्यमी यसलाई स्वामित्वको को नौका सेवा तीनवटा हेलिकप्टर मालिक हो।
वाहनहरु बीच, को oligarch उपलब्ध, यो सम्भव दुई Armored कार लायक एक लाख पाउण्ड प्रत्येक नाम छ। साथै, उपन्यास fairings दुई-लाग्यौं सुनको चीललाई रूपमा एयर ब्रस संग रूसी तीन रंगीए को रंग मा चित्रित छन् जो सबै भन्दा जो आदेश र विशेष मोडेल छौं धेरै वाहन, मालिक र Ducati मोटरसाइकल छ।
तपाईं थाह छ, हरेक वर्ष, फोर्ब्स पत्रिकाको नाम अमीर मान्छे ग्रह मा, र आफ्नो बचत बारेमा जानकारी प्रकाशित। यी डाटा अनुसार, संसारमा billionaires Abramovich रोमन को स्तर मा 68th ठाउँमा 2013 को अन्त्यमा थियो। 2014 को अन्त्यमा आफ्नो हालत 9.1 अर्ब डलर अनुमान गरिएको थियो। सूचीमा रूस अमीर मान्छे कार्यरत 14 औं स्थानमा ओगटेको छ।
के सम्पत्ति oligarch लागि उपलब्ध छ हामीलाई भन्नुहोस्। यसको सम्पत्ति हो:
केंसिंग्टन मा एटिक अपार्टमेन्ट खर्च 29 लाख पाउण्ड;
पश्चिम सुसेक्स 28 लाख भन्दा बढी पाउण्ड स्टर्लिङ मा विला;
18 लाख पाउण्ड स्टर्लिङ को मूल्य मा Knightsbridge मा एक छ-कहानी घर;
फ्रान्स घर लायक 15 लाख पाउण्ड;
40 लाख पाउण्ड स्टर्लिङ लागि सेन्ट ट्रोपेज मा घर;
Belgravia पाँच-मंजिल्ला हवेली, मूल्य 11 लाख पाउण्ड छ;
मास्को मा Dacha लायक 8 लाख पाउण्ड।
कति अमेरिका मा अमेरिका गणना गर्न थालेका छन्
होटल नदी रक होटल3* (साइप्रस / Ayia नापा): फोटो र समीक्षा
गेस्ट हाउस "यु Nikiticha", लू: समीक्षा र समीक्षा
के राम्रो दिन लेंस? ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ सल्लाह